kedu ihe atụ ụgbọelu ITIL - ITS Tech School
Akwụkwọ nkwado ITIL achọpụtala ihe kachasị ama n'etiti ndị ọkachamara dịka oge. A na - emezi nke a kpamkpam, mgbe ị tụlere ịbanye na ITIL n'etiti 15 kacha mma ịnye ụtụ aka na mbara ala n'afọ 2014. Ihe kpatara ihe mere ITIL Ndị ọkachamara akwụkwọ nwere njide maka ndị nnọchianya dị iche iche ma ọ bụ ndị na-achọ ọrụ bụ na achọrọ ọchịchị ITIL n'ọtụtụ njikọ dị na azụmahịa IT. N'ụzọ dị otú a, ndị ọkachamara ITIL na-enweta ụgwọ ọrụ bara ụba n'ọ bụla IT na-akpakọrịta n'ụzọ dị irè.
N'ileghara usoro doro anya nke usoro ITIL, ụmụazụ na-atụsi anya ike nwere mkparịta ụka dị mfe banyere oghere ọrụ ndị dị n'ihu usoro a. Akụkụ a dị ntakịrị ga-enyere onye na-ede akwụkwọ ahụ aka ịchọta echiche ọhaneze n'ebe ebe ọrụ ọrụ ugbu a maka ITIL ndị ọkachamara n'akwụkwọ.
Na mgbe niile, usoro ITIL jikọtara na Njikwa Ọrụ. Ebe kachasị anya a ga-atụ anya mgbe mmepụta nke ITIL kwadoro bụ ndị na-enyocha Analyst, Change Coordinator, Analyst Analyst, na na.
Akụkụ nke ITIL na Engine Engineering
Nlereanya Ọrụ maka ITIL ndị ọkachamara n'akwụkwọ
Mpaghara abụọ dị na ngwanrọ ka mma na nlekota. Mgbe ọganihu software na-achịkwa ịmepụta ngwa ọhụrụ n'ime oge ekenyela oge site na itinye nchịkwa aka, nkwado software na-echegbu onwe ya maka nchịkwa na nlekota oru mgbe ngwa ahụ gwụchara ma na-agba ọsọ. ITIL nwere akụkụ dị egwu igwu egwu na ngwanrọ.
Onye ọ bụla n'ime nchịkọta software, nkwado IT, usoro ma ọ bụ nchịkwa ga-egosi mmekorita nke kagburu ya na nkwenye ITIL.
Ịnabata akwụkwọ nkwado ITIL nwere ike nweta site na nyocha ITIL.
Foundation ITIL: Nkwenye a na-anwale nmalite mmụta nke ụkpụrụ dị mkpa, ụdị, akụkụ, ikike, echiche, okwu, na ihe ndị ọzọ.
ITIL n'etiti: Nke a na-enyocha ikike ndị na-arịọ maka nyocha nke nchịkwa.
Na-achịkwa Ndụ na Ndụ: Nlele a ga - eme ka ikike nke ibibi na ijikọta ihe n'echiche.
IKE ITI: Nkwenye a doro anya nke ọkachamara gị ọkachamara, ntụgharị ike, na usoro ITIL.
Ndị isi ITIL: Nke a bụ ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke nkwenye ITIL, ọ bụkwa nanị ndị mmadụ 35 ka ha nwetara site n'ebe nile n'ụwa.
Ruo ókè ahịa ahịa na-echegbu onwe ya, ebe a bụ ọnụ ọgụgụ ọrụ nke ị kwesịrị ịchọrọ maka echiche gị ọkachamara -
Ntọala mmalite(0 ka 7 afọ nke ahụmahụ):
N'ibido ịkpọ oku na nchịkwa IT, dịka ọmụmaatụ, IBM Tivoli na BMC Remedy.
Ọrụ ndị metụtara ntọala IT na MNC.
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, na-erite uru maka onye na-enyocha transmitter, na-enyere aka rụọ ọrụ, nkwado pụrụ iche, na ihe ndị ọzọ.
Ọkwa ọkwa(Karịrị afọ 7 ahụmahụ):
Ihe a na-adabere adaba, nhazi ọrụ dị ka:
Onye ọrụ nchịkwa ọrụ nke IT
Nkume ma ọ bụ Nsogbu Njikwa
Gọọmentị Desk Manager
Nkwuputa omimi di omimi nke ntọala putara ihe, dika ima atu,
Ndụmọdụ na-adịghị mma na ITIL
Onye na-enye ọzụzụ ITIL
Rịba ama na ọ bụ ezie na ị ruru eru igosi ITIL, ma nwee ike ịfe ya, na-adabere na ntọala ọkachamara gị, enwere ike ghara inwe nnukwu ohere dị ka oghere maka ọrụ na ohere na ị nweghị ntọala IT . Na-eche na, n'ọnọdụ ọ bụla, ị na-eme atụmatụ iji mezuo ma ọ bụ dị ka nke ugbu a nwere ọrụ na nhazi usoro na nchịkọta, nke a bụ ezigbo nkwado mmụta maka gị.
Nchọpụta Ntanetị ọhụrụ (Ọzụzụ Nlereanya) na-enye gị ka ị na-ewere ọmụmụ ihe na ITIL akwụkwọỌzụzụ ITIL na Gurgaon